थारुहरु कमैया वा जेलमा बस्नकै लागि जन्मेका हुन् त महोदय ?
Wednesday, 17 January 2018 22:19
-अनाथ अंकल /टिकापुर
बरु सय अपराधी छुटोस् तर एक निरपराधीलाई सजाय नहोस्। यो फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त हो। दुई वर्ष अगाडी टिकापुरमा घटेको घटनाले अझैसम्म टिकापुर बासीलाई राम्रोसंग निदाउन दिएको छैन। भीडमा कसले भाला चलाए त्यो हत्याकाण्ड भयो कसरि अनुमान गर्नु । अपराध त कोहिना कोहीबाट भयो, त्यो नियोजित रुपमा भएपनि भयो र आकस्मिक रुपमा भएपनि भयो। त्यसो भन्दैमा हत्याको आरोपमा गाउँभरिका थारुलाई थुन्नु पनि न्यायोचित होइन। टिकापुर घटना आपराधिक हो, यसमा राजनितिक जलप लगाउन सकिदैँन। तर आपराधिक घटनाको अपराधी पत्ता लगाउन सुक्ष्म र वैज्ञानिक अनुसन्धान हुनु जरुरि थियो र छ । दुर्भाग्य टीकापुर घटनाको वैज्ञानिक अनुसन्धान हुन सकेको छैन। प्रहरी आफैं घटनाको एक पक्ष भएकोले निष्पक्ष अनुसन्धानभन्दा पनि पूर्वाग्रहले बढी काम गरेको व्यहोरा मिसिल पढ्दा ठयाक्कै थाहा हुन्छ। हामि त भन्छौं टिकापुर घटनाको सम्भब हुन्छ भने अझै अनुसन्धान होस्। घटनाका पिडितहरुले छिटो भन्दा छिटो न्याय पाउन। यो मात्रै एउटा माग हो मानबअधिकारबादी, पत्रकार र न्यायप्रेमी टिकापुरबाशी थारु जनसाधारणहरुको ! छानबिनमा सहयोग सबैले पुर्याउनु पर्छ तर न्याय कसरि दिने त्यो जिम्मा त सम्मानित अदालतको हो।
निरिह जो छ त्यसको राज्य हुनु पर्छ कि कसो महोदय ? थारु आफैंमा एउटा शान्त र सोझो समुदायको जनजाति हो। तर यो पनि सत्य हो, राज्यका विभेदकारी नीतिका कारण थारुको परिवार आफ्नो थात थलो र जमीन समेत गुमाई कमैया बस्न अझै बाध्य छन्। असाध्य मेहनती र इमान्दार पहिचान बनाएका समुदाय हुन यिनीहरु। तिनको न त राज्यको स्थायी सत्तामा कुनै पहुँच छ नत व्यापारमा। कैलाली कञ्चनपुरमा अधिकांश साहुजीहरुका टहलु र रखवालहरु अझैसम्म थारु युवाहरु छन्। के तपाईंलाई तिनी हिंसात्मक हत्यारा जस्तो लाग्छ? हैन भने एक दुई जनाले गरेको अपराधमा २२ जनालाई दुई वर्षदेखि थुनामा राख्नु न्याय हो त ? नियोजित रुपमा निकारागुवामा सिआइएले गराएजस्तो हत्याकाण्ड गराइएको हुन सक्ने अनुमान समेत भयो। त्यसमा साम्प्रदायिक दंगा भड्काएर अस्थिरताबाट फ़ाइदा लिने सक्ति राष्ट्रका भूमिगत गिरोहको हात हुन सक्ने तर्फ अनुसन्धान हुनु पर्थ्यो। तर तर प्रशासनले त्यो जोखिम उठाएन। प्रसासनको लागि जे सजिलो लाग्यो त्यहि गरियो। केवल सोझा थारुलाई फ़साइयो। यहि आवाज गुञ्जिरहेको छ टिकापुरमा अहिले।
दुखसाथ भन्नु पर्छ, दुई वर्षदेखि जिल्लाअदालतमा रहेको मुद्दाको कुनै प्रकृया अगाडी बढन सकेको छैन । यति ढिलो गरी प्रशासनबाट मुद्दाको कुनै कारबाही अगाडि नबढाउनुमा अदालतले भोलि निर्दोष सावित गर्लाकि भन्ने आशंकाबाट पूर्वाग्रही हुदै फैसला अगावै चार वर्ष थुनामा राख्ने नियत देखिन्छ। तर राज्यले यदि २२ जनामध्ये कोही अदालतबाट निर्दोष प्रमाणित भए, अनाहकमा कारगारमा वसी गुमाएको शिक्षा, जीवन, अर्थ र पारीवारिक पीडाको बोझ यो राज्यले फिर्ता गर्न सक्छ? नत्र मुद्दामा अदालतले किन बहस रोकेको छ ? जस्ता प्रश्नहरुको एकदिन जवाफ दिनुनै पर्ने छ।
टिकापुर द्वन्दले थारुलाई मात्र छोएको छैन । बाग्लुङ्ग बिहुँकोटमा जन्मेका एक शिब प्रशाद कंडेल नामका नेपाली पनि द्वन्द पछि लापत्ता भएका छन् । उनि त्यो बेला लागु औसधि तस्करको परिबन्दमा परेर कैलाली जिल्लाको टिकापुरमा रहेको उनको कैलाली जिल्ला अबस्थित टिकापुर आफन्तको घर गएको उनका भिनाजु चक्र सापकोटाबाट थाहा भएको हो । त्यो मात्रै हैन, त्यहाका थारु समुदायबाट पनि बुद्धि चौधरी लगायत १७ जना ब्याक्तिहरु अझैसम्म पनि सम्पर्क बिहिन छन् भने केहि भागेर भारतको विभिन्न ठाउमा रहेको र टिकापुर मनोबैज्ञानिक डरको कारण फर्कन नसकेको देखिन्छ ।
राजनैतिक रुपमा नेपाली कांग्रेसका समर्थक शिब अहिले कुन अवस्थामा र कहा छन् कसैलाई थाहा छैन । उनि लगाएत केहि हत्यामा संलग्न भनिएका थारुहट आन्दोलनमा सहभागीहरु पनि हराई रहेको गाउलेहरु बताउछन । राज्य पक्ष र नागरिक समाजले उनीहरुको अवस्थाबारे अनुसन्धान गरि जानकारी दिनु पर्नेहो तर त्यो अझै हुन नसकेको स्थानिय र केहि मानाबधिकार कर्मीहरुको गुनासो छ । २०७२ भदौ ७ सोमबार दिउँसो टिकापुरमा थरूहट समर्थक आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच भएको झडपमा परी प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षकसहित ५ जना प्रहरी र २ जना सशस्त्र प्रहरीले ज्यान गुमाएका थिए । जातिय थरुहट राज्यको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका थारु समुदाय र सरकार बिचको असमझदारी बीच घटेको टिकापुरको बिभत्सव उक्त घटनामा भएका त्रुटिहरुलाई सच्याउनुको सट्टा अहिलेसम्म पनि राज्यले नत प्रताडित परिवारलाई राहत दिन सकेको छ नत हराई रहेका मानिसहरुको अवस्थाबारे जानकारी दिन सकेको छ ।
सरकारबाट बनाइएको घटनामा संलग्न र मतियार सबैलाई सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको टीकापुर घटना अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले पनि पूर्ण रुपमा हराइरहेका नागरिक, प्रताडित नागरिकहरु समेतको रिपोर्ट सरकारलाई बुझाउनु पर्ने थियो । तर विवरण हेर्दा त्यो देखिएको देखिदैन । विवरणमा केवल घटना स्थलमा मरेका अंगभंग भएकाहरुको मात्र विवरण सार्वजनिक गरियो । जसले गर्दा घटनामा हराएका, घर छोडी भागेका र राज्य पक्ष र सुरक्षा निकायबाट गम्भीर प्रकारका धम्किले विक्षिप्त बनेका नागरिकहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु पर्नेबारे अझै पनि राज्य र तत्कालिन बिद्रोही पक्ष बल्न सकी रहेका छैनन् । अहिले स्थानिय स्तरमा टिकापुरले नया स्थानिय नेतृत्व त पायो तर त्यसले यो बिसयमा स्थानिय टिकापुर बासीको मनोबैज्ञानिक क्षतिलाई पुर्नकोलागी आवास्यक कार्वाही थाल्नेबारे छलफल गर्न नसकेको स्थानियहरुको गुनासो छ ।
कैलाली कारागारमा रहेका घर जग्गा लिलाम हुन थालेका लाहुराम चौधरी, बीरबहादुर चौधरी र परिवारलाई छाक टार्न गाह्रो भएका विश्राम चौधरी लगायतका नागरिकहरु अहिले जेलमा छन्। उनीहरुको मुद्दा राज्यले कहिले हेर्ने र उनीहरुले न्याय कहिले पाउने ? त्यस्तै शिब कंडेल,स्थानिय थारुका परिवार लगायत प्रहरी र केहि अन्य त्यो बेलादेखि हराई रहेका छन् र परिवार वा प्रशासनको सम्पर्कमा आउन सकेका छैनन्। ति नेपालि नागरिकहरुको खोजि गर्नु के राज्यको दायित्व भित्र पर्दैन ? त्यस्तै टिकापुरमा राजपाको चुनाब चिन्हबाट स्थानिय नेता रेशम चौधरीले संसदीय चुनाब जितेका छन्। उनी २०७२ भदौमा कैलालीमामा एक नाबालक र एससपीसहित सात सुरक्षाकर्मी हत्याका फरार अभियुक्त हुन्। उनि अहिलेसम्म अदालतमा उपस्थित भएर उनीमाथि लागेको आरोपबारे सफाई पाएका छैनन्। उनले वारेश मार्फत सांसद सदस्यको प्रमाणपत्र पाउनु पर्ने दावी गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले दिएन। त्यो बिरुद्द रेशमका आफन्तले सर्बोच्चमा मुद्दा दिए। तर सर्बोच्च अदालतले अभियोग लागेको व्यक्तिले सफाई नलिएकाले प्रमाणपत्र लिन नपाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यो अवस्थाले टिकापुर शान्त छैन र अझै असान्त रहन सक्ने संदेश दिएको छ। त्यसको न्यायिक हल खोज्नु राज्यकालागी चुनौती र जरुरि दुवै देखिन्छ।
तात्कालिक परिवेशलाई हेर्दा रेशम चौधरीको केशले राज्यको निर्णयमा असजिलो पार्न सक्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतर्फ आपराधिक घटनाको मुद्दालाई किनारा लगाउने नाममा उनलाई बिना अनुसन्धान उन्मुक्ति दिँदा समाजमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ र कुनैपनि सभ्य समाजको लागि यो सुहाँउदो हुदै होइन। त्यो सन्दर्भमा रेशम चौधरीले यो घटनामा आँफु निर्दोष रहेको, आँफुलाई फ़साइएको कारण अदालतले आँफुलाई न्याय दिनु पर्ने आवाज बुलन्द पारेका छन्। जेलमा भएका र अहिलेसम्म लापत्ता भएका आरोपीहरुबारे मानब अधिकारबादीहरुले समेत न्याय दिनु पर्ने आवाज ब्यापक रुपमा उठेको छ। त्यो बिषयमा अदालत, राज्य प्रशासन र आँफुलाई फ़साइएको दाबि गर्ने जेल भित्र रहेका, भूमिगत जिबन बिताएका र हराई रहेका सम्पर्कमा रहेर छिट्टो भन्दा छिट्टो निचोडमा पुर्याउन सहयोगी भूमिकामा रहनुको विकल्प देखिदैन। यदि त्यसो भयो भने टिकापुरका जनताको अभिमतको पनि सम्मान हुनेछ भने मारिएका, बेपत्ता पारिएका वा हराइरहेका र हत्याको आरोपमा जेलबाट न्यायको भिक्षा माग्दै गरेका लाहुरामहरुको परिवारको अझै सहारापुर्वक बाच्ने आशालाई त्राण दिने छ।
More in this category: « बिचारको कुनै देश हुदैन ( कुराकानी)	सितलहरको पिडालाई कम गर्दै एनआरएन »